Football Khabar » कोपा अमेरिका : कतारलाई हराउँदै अर्जेन्टिना क्वार्टरफाइनलमा !
कोपा अमेरिका : कतारलाई हराउँदै अर्जेन्टिना क्वार्टरफाइनलमा !
लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना कठिन अवस्थाबाट ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको नकआउट चरण प्रवेश गरेको छ । नेपाली समयअनुसार सोमबार बिहान भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिनाले आगन्तुक टोली कतारमाथि २–० को जित निकाल्दै उपाधि होड कायमै राखेको हो ।
तर, खेलको ८२औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले अग्रता बढायो । उसका लागि अगुएरोले आकर्षक गोल गरेपछि खेल अर्जेन्टिनाले २–० ले जित्यो ।
युवा फरवार्ड पाउलो डिबालाले यस प्रतियोगितामा पहिलोपटक बेन्चबाट खेल्ने मौका पाए । उनलाई खेलको ७६औं मिनेटमा गोलकर्ता मार्टिन्जको स्थानमा मैदान छिराइएको थियो ।
प्रकाशित मिति ८ असार २०७६, आईतवार २०:५१